Dalxiiska Warshadaha - Madaxweynaha Kikkoman Zhenji Foods Co., Ltd.
Soo-saarista Tiknoolajiyad Weelka Soy Sauce Soy tayo sare leh
Saliida soy ee soodhada leh ee soodhada leh ee milixda leh ee milixda leh ee milixda leh waa milix iyo sokor. Suugada soy waxaa lagu kariyaa bilo badan iyadoo la raacayo hab dhaqameed iyo qalab casri ah, oo caan ku ah dhadhankeeda hodanka ah iyo dhadhanka aad u fiican.
Isku darka khibradeena soo saarista ah ee tikniyoolajiyadda sare ee Kikkoman, waxaan ka dhigi karnaa Suugo soy tayo sare leh oo tayo sare leh.
Habka qoditaanka geed-qallajinta by qumbaha, waxay leedahay aasaaska sare ee soo saaridda tignoolajiga khal.
Tiknoolajiyadda hal abuurka khamriga qarsoon waa tikniyoolajiyadda halbeega casriga casriga ah, shirkadeenna waa shirkadda ugu horreysa xagga tiknoolajiyada wax soo saarka iyo qalabka.
Markii la helo iskaashatada hormarinta caalamiga ah iyo tikniyoolajiyada cilmi baarista ee iskaa ah, iskudarkaya fahamka qoto dheer ee dhaqanka cuntooyinka Shiinaha, waxaan sii wadi doonnaa horumarinta iyo soo saarista macaamiisheena caan.
Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa amniga iyo tayada sare.
Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa amniga iyo tayada sare si aan u helno kalsooni buuxda macaamiisha macaamiishayada iyo adeegyadeena.
Waxaan ku fulinaa nidaamka maaraynta tayada si adag adigoon wax tanaasul ah lahayn, anagoo ku soo bandhigeyna xakamaynta hanaanka wax soosaarka oo adag, tijaabooyin badan oo ku saabsan shey kasta oo ceyriin ah kahor umulida, tijaabooyinka kimikaliska iyo kormeerida waqtiga ee dhanka howlaha wax soo saarka, iyo sidoo kale howlgalka jaangooyooyinka shaqaalaha ee wax soo saar kasta. xariiq.
Tan iyo markii la aasaasay, waxaan helnay shahaadooyin badan oo gudaha ah iyo kuwa caalamiga ah, oo ay ku jiraan ISO9001 (Nidaamka Maareynta Tayada), FSSC22000 (Nidaamka Maareynta Badbaadada Cuntada), ISO14001 (Nidaamka Maareynta Deegaanka), KOSHER (Shahaadada Cunto Kosher), Shahaadada Dayactirka Aqoonsiga ee GMO ee SGS. , HALAL (HALAL Cadeyn Shahaadada Cunnada oo ay soo saareen Ururka Islaamiga ah ee Shandong iyo MUI), iwm. Soo iibsiga, waxsoosaarka, iibinta iyo xiriirada kale ayaa shaqada ka dhigaya, iyagoo si adag u hoggaansamaya shuruudaha nidaamka shahaadada, iskuday in aan laga gaabin. Bishii Meey 2020, shirkadda waxaa hubisay shirkadda SMETA ee SGS, taasoo sii wanaajisay tartankeeda suuqa caalamiga ah.